I-Protocol ye-SARS-CoV-2 Coronavirus Inactivation nge-Sonication - Hielscher Ultrasound Technology
I-Hielscher VialTweeter iyunithi eyingqayizivele yokulungiselela amasampula amaningi we-ultrasonic, esetshenziselwa ukungasebenzi i-coronavirus SARS-COV-2. I-VialTweeter ivumela ukulungiselela izigaxa zesampula ezifika ku-10 ngasikhathi sinye futhi ngaleyo ndlela iyunithi ekahle yokucubungula amasampula amaningi.
Ukungasebenzi kwe-SARS-CoV-2 Coronavirus nge-VialTweeter
Ngemuva kokususa i-fixative, ama-monolayers ahlanzwa kathathu nge-phosphate-buffered saline (PBS) ngaphambi kokukhuhla amaseli abe yi-1mL MEM / 5% FBS futhi enziwe amandla (3 × 10 wesibili, amasekhondi ayi-10 ku-100% amandla ne-amplitude) kusetshenziswa i-Hielscher iprosesa le-ultrasonic UP200St ngeVialTweeter okunamathiselwe. Ama-supernatants acacisiwe ngokufakwa kwe-centrifuging ku-3000 × g imizuzu eyi-10. Funda umthetho olandelwayo ogcwele lapha we-SARS-CoV-2 coronavirus inactivation eyenziwe nguWelch et al. (2020) ngezansi:
Amaseli e-Vero E6 (i-Vero C1008; i-ATCC CRL-1586) akhuliswa kumandla aphansi abalulekile we-Eagle (MEM) afakwa nge-10% (v / v) fetal calf serum (FCS). Igciwane elisetshenzisiwe kwakuyinkinga ye-SARS-CoV-2 hCOV-19 / England / 2/2020, ihlukaniswe yi-PHE eqenjini lokuqala lesiguli e-UK ngomhlaka 29/01/2020. Leli gciwane litholakale endimeni 1 futhi lasetshenziselwa ukwenza izifundo zingasebenzi endimeni 2 noma 3.
Ngama-reagents namakhemikhali asetshenziselwa ukusebenza kwe-SARS-CoV-2 kanye nokususwa kwe-cytotoxicity esebenzayo sicela ubheke umbiko wesayensi kaWelch et al. (2020).
Ukungasebenzi kwegciwane ngama-detergents – I-SARS-CoV-2 Coronavirus Inactivation protocol eyenziwe nguWelch et al. 2020
Okwemikhiqizo yezentengiselwano, ukulungiselela amagciwane (uketshezi lwesiko lezicubu, izihloko ezisukela ku-1 × 106 kuya ku-1 × 108 I-PFU / ml) iphathwe ngokuphindwe kathathu ngama-reagents ekugxileni nasezikhathini zokuxhumana ezinconywe kumiyalo yabakhiqizi yokusetshenziswa, lapho kutholakala khona, noma ukugxila kanye nezikhathi ezicelwe ngokukhethekile ngokuhlolwa kwamalabhorethri. Lapho ububanzi bokugxila bunikezwe ngumenzi, isilinganiso esiphansi somkhiqizo kwisampula sahlolwa (isb. Ukuhlushwa okunconywe okuphansi kakhulu komkhiqizo wokuhlola). Ama-reagents amashubhu ezokuthutha ahlolwa kusetshenziswa isilinganiso sevolumu eyodwa yoketshezi lwesiko lezicubu kuya kumavolumu ayishumi we-reagent, ngaphandle kokuthi isilinganiso sevolumu yesampula uketshezi kuya kuma-reagent sicacisiwe ngumenzi. Ama-detergent, ama-fixatives nama-solvents ahlolwe ezindaweni ezibonisiwe zezikhathi ezikhonjisiwe. Zonke izinyathelo zokungasebenzi zenziwa emazingeni okushisa egumbi (18 - 25 ° C). Ukuhlolwa kwezinye izinhlobo zesampula, igciwane lafakwa ku-matrix yesampula ekhonjisiwe ngesilinganiso esingu-1: 9, bese liphathwa ngama-reagents wokuhlola njengangenhla. Zonke izivivinyo zazibandakanya amasampula wokulawulwa okuphindwe kabili okulawulwa okuphindwe kabili ngevolumu elinganayo ye-PBS esikhundleni se-reagent test. Ngokushesha okulandela isikhathi sokuxhumana esidingekayo, i-1mL yesampula ephethwe yacutshungulwa kusetshenziswa i-matrix yokuhlunga ekhethwe ngokufanele. Ukususwa kwe-reagent kokuhlolwa kokungasebenzi kwenziwa ngefomethi yekholomu enkulu ye-spin kusetshenziswa i-Pierce 4mL Detergent Removal Spin Columns (Thermo Fisher), noma ngokugcwalisa amakholomu we-Pierce 10mL umthamo centrifuge angenalutho (Thermo Fisher) nge-SM2 Bio-Beads, Sephacryl S-400HR noma I-Sephadex LH-20 ukunikeza ubuhlalu / i-resin egcwele i-4mL. Ukuze kuhlanzwe kusetshenziswa izihlungi ze-Amicon, amasampula ama-2 × 500μl ahlanzwa kusetshenziswa izihlungi ezimbili ze-centrifugal ngendlela echazwe ngaphambili, bese ahlanganiswa ndawonye. Okwe-formaldehyde ne-formaldehyde okususwa kwe-glutaraldehyde, isihlungi esisodwa sasetshenziswa ngevolumu yesampula engu-1 × 500μl, savuselelwa ngemuva kokucutshungulwa ku-500μl PBS, futhi sangezwa ku-400ul MEM / 5% FBS. Yokwenza kungasebenzi kwegciwane
ama-monolayers, 12.5 cm2 amabhodlela wamaseli we-Vero E6 (2.5 × 106 amaseli / i-flask ku-2.5mL MEM / 5% FBS) atheleleke ku-MOI 0.001 futhi afakwa ku-37 ° C / 5% CO2 amahora angama-24. I-supernatant isusiwe, futhi amaseli alungiswa kusetshenziswa i-5mL ye-formaldehyde, noma i-formaldehyde ne-glutaraldehyde ekamelweni lokushisa imizuzu eyi-15 noma engu-60. I-fixative isusiwe, futhi ama-monolayers ageza amahlandla amathathu nge-PBS ngaphambi kokukhuhla amaseli abe yi-1mL MEM / 5% FBS ne-sonicated (3 × 10 second on, 10 seconds off at 100% power and amplitude) using UP200St with VialTweeter attachment (Hielscher Ultrasound Ubuchwepheshe). Ama-supernatants acacisiwe ngokufakwa kwe-centrifuging ku-3000 × g imizuzu eyi-10.
I-VialTweeter ye-Sonication Enamandla Yezitsha Ezivaliwe
Imininingwane ye-reagent esetshenziselwe i-SARS-CoV-2 coronavirus inactivation ne-ultrasonic VialTweeter ngokuya ngephrothokholi kaWelch et al. 2020
I-protocol ephelele efaka ukusetshenziswa kwe-Hielscher VialTweeter ingatholakala lapha:
I-VialTweeter ye-ultrasonic virus inactivation
I-Sonication ye-10 izitsha ngesikhathi esisodwa
Akukho ukungcoliswa okuphambene
Akukho ukulahleka kwesampula
Ukuqoshwa kwedatha okuzenzakalelayo
IVialTweeter nayo isetshenziselwa i-
Ukuphazamiseka kwezinhlayiyana zegciwane
Ukukhishwa kwe-Nucleic acid: Ukuhlukaniswa kwe-DNA / RNA
Ukuhlukaniswa kwe-DNA / RNA
Ama-Dismembrator we-Ultrasonic aphezulu kanye nokuphazamiseka kwamaseli
I-multi-sample ultrasonicator VialTweeter ingesinye sezixazululo eziningi ze-ultrasonic zokulungiselela isampula kumalabhorethri wezinto eziphilayo, amakhemikhali namakhemikhali. I-Hielscher Ultrasonics inikeza i-ultrasonic dismembrator ekahle yohlelo lwakho lokusebenza, isb. I-cell lysis, i-cell extraction, i-homogenization yezicubu, i-lysate solubilization, ukuncibilika, isampula yokunciphisa njll.
Sazise ukuthi mangaki amasampula okufanele usebenze ngehora nosuku, uma ukhetha i-sonication eqondile noma engaqondile nokuthi ilitshe le-ultrasonic sample treatment liyini. Sizokuncoma iyunithi ye-ultrasonic efaneleke kakhulu emsebenzini wakho wansuku zonke!
Amaprosesa we-Hielscher Ultrasonics 'digital ultrasonic afakwe isoftware ehlakaniphile, ukuqoshwa kwedatha okuzenzakalelayo, izinketho ezilula zangaphambi kokusetha zokulawula izinga lokushisa, ubude be-sonication, imodi yomjikelezo / yokushaya kwenhliziyo kanye nokukhanyisa kwesampula nokulawula okukude kwesiphequluli. Silwela ukwenza amadivayisi wethu we-ultrasonic abe smart ngangokunokwenzeka ukuze ucwaningo lwakho nomsebenzi wakho ube lula futhi uphumelele ngangokunokwenzeka.
Chofoza lapha, ukuthola ezinye izinhlelo zokusebenza kufaka phakathi izivumelwano zokulungiselela isampula ye-ultrasonic nge-VialTweeter!
Ayini amaseli eVero?
I-Vero E6, eyaziwa nangokuthi i-Vero C1008 (i-ATCC No. CRL-1586) ilayini weseli eliqhamuka ku-Vero 76 futhi isetshenziswa ocwaningweni lwe-SARS-CoV ne-SARS-CoV-2 coronaviruses. Amaseli e-Vero ayinzalo yamaseli asetshenziswa kumasiko amaseli. I-'Vero’ Uhlu lozalo lwaluhlukaniswe namaseli ezinso epithelial akhishwe enkawini eluhlaza yase-Afrika (Chlorocebus sp.).
Amaseli e-Vero E6 akhombisa ukuvinjelwa kokuxhumana okuthile, ngakho-ke kufanelekile ukusabalalisa amagciwane aziphindaphinda kancane. Imigqa yamaseli e-Vero E6 ijwayele ukusetshenziselwa ukuphenya i-cytopathology yama-coronaviruses SARS-CoV kanye ne-SARS-CoV-2 njengoba amaseli e-Vero (amaseli wezinso zezinkawu zase-Afrika) ekhombisa ukuvezwa okuningi kwe-angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) receptors. Ama-receptors e-ACE2 ayisiza esikhulu semikhumbi se-SARS-CoV-2 coronavirus.
Isibonelo, u-Ogando et al. (2020) bathole ukuthi i-SARS-CoV-2 – uma kuqhathaniswa ne-SARS-CoV – kukhiqize amazinga aphakeme we-intracellular virus RNA, kepha ngokumangazayo cishe cishe ama-50 inzalo yegciwane lesandulela ngculazi engatheleleki yatholwa endaweni yesiko. Ngaphezu kwalokho, banqume ukuthi ukuzwela kwamagciwane amabili kuma-inhibitor amathathu asungulwe we-coronavirus replication (i-Remdesivir, i-Alisporivir ne-chloroquine) kuyafana kakhulu, kepha ukuthi ukutheleleka kwe-SARS-CoV-2 bekuzwela kakhulu ekwelashweni kwangaphambili kwamangqamuzana ane-interferon ene-pegylated i-alpha. Umehluko obalulekile phakathi kwamagciwane amabili iqiniso lokuthi – ngokudlula kumaseli we-Vero E6 – I-SARS-CoV-2 ngokusobala ingaphansi kwengcindezi yokukhetha enamandla yokuthola ukuguqulwa okuguqukayo kuhlobo lwayo lwe-spike protein. Lokhu kuguquka kuguqula noma kususe indawo yokuhlanza 'efana ne-furin-like cleavage' esifundeni esixhuma izizinda ze-S1 ne-S2 futhi kuholele ekushintsheni okuvelele kakhulu kwe-phenotypic ekuhloleni kwe-plaque.